नरेन्द्र मोदीको यौ, न सम्बध बारे राखी सावन्तको यस्तो खुलासा ! पूरा विवरण हेरि सेयर गरौं – Nepal Khabar
नरेन्द्र मोदीको यौ, न सम्बध बारे राखी सावन्तको यस्तो खुलासा ! पूरा विवरण हेरि सेयर गरौं
November 18, 2020 adminLeaveaComment on नरेन्द्र मोदीको यौ, न सम्बध बारे राखी सावन्तको यस्तो खुलासा ! पूरा विवरण हेरि सेयर गरौं
नरेन्द्र मोदीको यौ’ न सम्बध बारे राखी सावन्तको यस्तो खुलासा ! पूरा विवरण हेरि सेयर गरौं
बलिउडमा सधैं चर्चामा रहने अभिनेत्री तथा डान्सर राखी सावन्तले नरेन्द्र मोदीका बारेमा नयाँ खुलासा गरेकी छिन् । राखीले एक अन्तरवर्तामा मोदीको तारिफ गर्दै आजसम्म यौ’ न सम्बन्ध पनि नराखेको भनेकी छिन् । उनले एक युट्युब अन्तरवार्तामा आफुलाई मोदी सच्चा साधु सन्त भएकोमा कुनै शंका नभएको दावी गरेकी हुन् ।
उनका अनुसार आजसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यौ’ नको अनुभव गरेका छैनन् । उनको यो भनाईलाई धेरैले ट्रोल बनाइरहेका छन् । उनी यो भन्दा पहिले पनि यस्तै बयानका कारण चर्चामा छिन् । मोदीको सानैमा बाल बिबाह भएको थियो तर पछि उनले किशोरावस्थामा बैबाहिक जीवन त्यागेर सन्यासी जीवन बिताएका थिए ।
अहिले पनि विगतमा गरिएको बाचा पुरा गर्न नसके पछि जनता भड्काउन हिन्दु, मुस्लिम र राष्ट्रवादको नारा लिएको विपक्षीले आरोप लगाएका छन् । बेरोजगारी, गरिबी, महिला अधिकार र भारतमा सबैभन्दा महत्वको साथ हेरिएको किसान वर्गको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप उनी माथि छ । अर्को तिर गुजरातका केही सिमित व्यापारिको हातमा भारतको अर्थतन्त्र सुम्पन लागेको आरोप उनी माथि छ ।
७० बर्ष पुरानो नेपालको दुर्लभ फोटो र भिडियोहरु अहिले हेर्दा अचम्म लाग्छ !! सक्दो सेयर गरेर सबैलाई जानकारी गरौं
कोरोनाका कारण नाबालिकाले त्यागिन् प्राण, पोको पारेको देखेर सबै भावुक [भिडियो सहित]
भारतमा बनेको कोरोना भ्याक्सिन छिटै नै भारत र नेपालमा उपलब्ध हुनेछ- नरेन्द्र मोदी